Hadii aad leedahay xannuun ku dhaca xiidmaha ama caloosha .. Ka fogow cuntooyinkan – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Hadii aad leedahay xannuun ku dhaca xiidmaha ama caloosha .. Ka fogow...
Hadii aad leedahay xannuun ku dhaca xiidmaha ama caloosha .. Ka fogow cuntooyinkan
Borofisar ku takhasusay cilmiga caloosha ee Jarmalka, Thomas Zweiferline, ayaa sheegay in xanuunada caloosha ku dhaca, caloosha ay u baahan yihin nafaqo gaar ah, maadaama ay lagama maarmaan tahay in laga fogaado noocyo cunto ah.
Sida laga soo xigtay borofisarkan Zweiferline, waxaa lagama maarmaan ah dadka ka xanuunsan caloosha xiidmaha qabaa in ay iska dayaan cunnooyinka ay ku badan yihiin dufanka, cuntooyinka sababa sida digiraha iyo kaabashka, iyo cunnooyinka sababa calool fadhiga sida shukulaatada, mooska iyo bur cad, halka cuntada hodanka ku ah fiber-ka cunnada sida khudradda, miraha iyo waxyaabaha hadhuudhka ka sameysan oo dhan la cuno.
Waxaa kale oo muhiim ah in la cabo cabitaanno badan, maadaama cabitaannada sifeeyaan qashinka yar yar ee caloosha ku jira, sidaa awgeed infekshannada cusubi ma samaysmaan, sida ay ku warrantay Wakaaladda Wararka Jarmalka.
Waxaa xusid mudan in caloosha xiidmaha ay tahay cudur guud oo saameeya habka dheef-shiidka, kaas oo ah sameysashada guluubyo madhan sida xiro ku dhaca gidaarada xiidmaha.
Cudurkani wuxuu badanaa ku dhacaa xiidmaha waaweyn, wuxuu sidoo kale ku soo bixi karaa xiidmaha yar-yar xaaladaha qaarkood.
Bukaannadu badanaa waxay xanuun ku dareemaan caloosha hoose ee bidix, iyo sidoo kale qandho, waxay sidoo kale ka cawdaan lallabbo, shuban, iyo calool-fadhi.
Warbixnta maanta COVID19 somaliland
Warbixintii ugu danbeysay COVID19 Soomaaliya